Video edezi Atụmatụ - Atụmatụ maka Ime a Mma Home Movie
> Resource> Video> Home Video edezi Atụmatụ - Olee otú Mee a Great Home Movie
Home Video edezi Atụmatụ - Olee otú Mee a Great Home Movie
Ọtụtụ mmadụ na-camcorders na igba a otutu fim na chọrọ iji chebe n'ụlọ fim n'ihi na ogologo na-adịgide adịgide na-echeta. Ọ bụrụ na ị ga-amasị ụfọdụ n'ụlọ fim na ike ga-Edebewo na mmasị site ezinụlọ,-agbalị ịgbaso ihe n'ụlọ video edezi Atụmatụ n'okpuru.
Home video edezi Atụmatụ maka mma n'ụlọ nkiri Ndinam
1. Mara ihe i camcorder ọma
Jide n'aka na ị dị nnọọ maara na gị camcorder tupu Ndekọ nke mere na ị nwere ike igba ezi videos na photos. Ọ bụrụ na ị na-adịghị, na-agụ akwụkwọ ntuziaka na omume égbè n'ihu ị na-aga gbaa ndị videos maka ụlọ gị nkiri.
2. Mee a n'ụlọ nkiri atụmatụ
Buru n'uche ihe n'ụlọ gị gị na nkiri na-aga ịbụ ezigbo mma na-akwụ ukwuu anya ka ọdịnaya. Na mgbe ị na idekọ videos, na-atụmatụ echiche. Site n'ime nke a, ị pụrụ ime n'ụlọ gị gị na nkiri ọzọ coherent.
3. Gbaa ezi videos
Jide n'aka gị videos nwere ọtụtụ nke ìhè na-adịghị blurry. Na-adịghị nke ndabere ụda, ma na-agbalị ịchịkwa ya dị ukwuu dị ka o kwere omume. E wezụga, na-agbalị gbaa Mpaghara si dị iche iche angles.
4. Tinye video edezi mmetụta
Mgbe ị na-edezi gị fim iji ụfọdụ video edezi software, ị nwere ike ewepụtụ, kewaa, bugharia, gbawara n'etiti videos tupu ma ọ bụ mgbe na iji PIP, na-awụlikwa elu-ịkpụ, ihu Off mmetụta, ma adịghị eji ọtụtụ mgbanwe mmetụta.
5. Ikpokọta foto na vidiyo na ọnụ
Iji mee ka gị n'ụlọ video elu ndị ọzọ, ị nwere ike itinye ụfọdụ ka photos ka vidiyo ma ọ bụ iji ụfọdụ elu video mmetụta dị ka foto na foto utịp ke iMovie. Ha ga-eme ka ị video ọzọ na-akpali.
6. Unu mee n'ụlọ video kwa ogologo
Kasị n'ụlọ videos bụ ogologo na-agwụ ike. Otú ọ dị, ndị mmadụ na-adịghị amasị ịhụ nnọọ igwu egwu. Ya mere, mee n'ụlọ gị gị na video obere, ụtọ na mma. Nweta ihe kasị mma Mpaghara na tụfuo ndị na-adịchaghị mkpa ihe.
7.-enweta ụfọdụ ọchị
Ịga nke ọma TV mkpọsa ngwá ahịa na-na ezi ọchị na-eme ka ndị obi ụtọ. Agbakwunye ụfọdụ ọchị n'ụlọ gị videos ga-eme ka ha na-esonụ larịị ozugbo. Ị nwere ike ịchọta ụfọdụ na-akpa ọchị video online ma na-achọta ụfọdụ inspirations site na ha na-esi eme ka ndị na-akpa ọchị video na mma.
Cheta na oké n'ụlọ videos kwesịrị mkpụmkpụ, na-akpa ọchị, uko na mfe na-ekiri. Ndị a bụ nanị mfe n'ụlọ video edezi Atụmatụ. Na-esonụ bụ ikpe mbipute nke Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) (Windows na Mac version), nke nwere ike nweta niile gị na nrọ banyere video edezi software.
Home Video Editor: Olee dezie Home Video
Olee otú ịhọrọ a Good Video Editor Mkpa Gị
Olee otú iji tọghata FLV ka 3GP
Olee otú mbubata FLV ka Adobe Premiere maka edezi
FLV Player: Olee otú Play FLV Files